”Jeeg lacag ah” oo lagu kaalmeyn doono dhallaanka saboolka ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
”Jeeg lacag ah” oo lagu kaalmeyn doono dhallaanka saboolka ah
La daabacay fredag 6 september 2013 kl 09.42
Dowladda Iswiidhen waxay hadda ku talajirtaa in ay soo rogto nidaam loogu magac-daray lacagta waqtiga firaaqada oo loogu talageli doono in lagu kaalmeeyo carruurta ay qoysaskoodu dhaqaala-xumida ku sugan yihiin. Lacagtaas la qoddeeyey waxay noqon doontaa saddex kun oo karoon sannadkii oo la siinayo cunuggiiba.
– Carruurta la nool qoysaska uu dhaqalahoodu xun yahay ugama ay qaybqaataan dhaqdhaqaaqyada waqtiyada firaaqada si u dhiganta carruurta kale. Sidaas awgeed ayaan u dooneynnaa in aan dhaqangelinno jeegga waqtiga firaaqada. Sidaasna waxaa ka dhawaajisay wasiiradda arrimaha carruurta iyo dhallinyarada Maria Larsson.
Waxaa la og yahay in ay lacag tahay in lagu biiro naadi isboorti ama la raaco safar gaaban oo ay ardaydu aaddo. Markaas dhallaanka qoysaskoodu sabool yihiin ma awoodaan in ay ka qaybqaataan dhaqdhaqaaqyada la abaabulo. Taasna waxaa lagu muujiyey tirakoob ay soo saartay hay’adda tirakoobka qaranka oo loo soo gaabiyo SCB.
Dowladdu waxay hadda meel u dhigtay lacag gaareysa 122 milyan oo karoon oo loogu talagalay waqtiyada firaaqada ee carruurta ay qoysaskooda dhaqaala-xumidu hayso. Dhanka kale waxay Maria Larsson qabtaa inaan arrintan loo turjumin in kaalmada dhaqaale oo qoysaska la siiyaa uu yahay mid hooseeya.
– Horay ayaan u kordhinney kaalmada dhaqaale oo qoysaska la siiyo, laakiin waxaa loo baahan lacag dheeraad ah oo la siiyo qoysaska saboolka ah oo carruurta haysta. Ma dooneynno in dhaqaaluhu uu noqdo waxa hortaagan in carruurtu u korto hab horumariya garaadkooda iyo xiisahooda, ayey tiri Maria Larsson.
Lacagtaan waqtiga firaaqada oo khidmad laga bixinayo waxay bilaabaneysaa bartamaha sannadka dambe.